प्रजातन्त्रका सेनानी हेमराज कोइराला - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
होमपेज फिचर प्रजातन्त्रका सेनानी हेमराज कोइराला
प्रजातन्त्रका सेनानी हेमराज कोइराला
८ फाल्गुन २०७७, शनिबार २३:३७
नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय हेमराज कोइराला जन्म वि.सं. १९८५ साउन ३ गतेका दिन कोशी अञ्चलको भोजपुर जिल्ला सदरमुकामको नजिकैमा पर्ने पोखरे गाउँमा पिता उद्ववप्रसाद तथा माता धनकुमारी कोइरालाको काहिँला छोराको रूपमा भएको थियो ।
उहाँका माहिला दाजु गंगाप्रसाद कोइरालासमेत प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा संलग्न भई निर्वासित हुनुभएको हुँदा उहाँहरू दुवैको सर्वस्वरहण भयो । त्यसै बखत उहाँहरूका पिता मुखिया उद्ववप्रसाद कोइरालाको दुःखद निधन भयो । आफ्ना पिताको काजक्रिया गर्न समेत उहाँहरू स्वदेश आउन पाउनुभएन । वि।सं। २०२६ सालको आममाफीपछि स्वदेश फर्कनुभयो र त्यसपछि पनि प्रजातन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षमा निरन्तर संलग्न भइरहनुभयो । पत्नी, एक छोरा र एक छोरीका पिता प्रजातन्त्र सेनानी हेमराजले आफ्नो परिवारको सेवाभन्दा प्रजातन्त्रको प्राप्ति र दीनहीन जनताको सेवामै आफूलाई निरन्तर समर्पित गराउनुभयो । उहाँकी पत्नी र छोराछोरीले कष्टकर जीवन बिताउनु प¥यो । उहाँले आममाफीपछि देशभित्र आएपछि पनि पटक–पटक जेलको जीवन बिताउनु प¥यो । प्रजातन्त्र प्राप्ति र जनताको हकहितका लागि, लागिरहनुभएका कोइरालाले वि.सं. २०३२ सालदेखि २०५७ भाद्र २६ गते (मृत्युपर्यन्त) सम्म निरन्तर नेपाली काङ्ग्रेस भोजपुरको जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।
शायद हेमराज कोइरालाको अभिभावकीय ओत या भनौँ, संरक्षण अझै धेरै छन् । उहाँसंगको सामिप्यका खास खास क्षणहरूलाई लेख्ने हो भने पनि भावी पुस्ताका लागि एउटा स्पष्ट प्रेरक मार्ग बन्दछ । चिरपरिचित सबैले बडो श्रद्धाका साथ ‘काइँला बा १’ अथवा ‘काँल्दाइ’ भनेर सम्बोधन गर्ने हेमराज कोइराला भोजपुरको मात्र नभई मुलुकका तमाम प्रजातन्त्र प्रेमीहरूका लागि त्यत्तिकै श्रद्धेय र प्रेरक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो ।
चारतारे झण्डाका पछि लागेर सयौँ गोता र हण्डर खानु परे पनि चारताराको स्वाभिमानको रक्षा गर्दा पाउने सन्तोष नै उहाँका लागि सर्वोपरि थियो । जेल, नेल र निर्वासित जीवनका ती कष्टदायी त्रासदीपूर्ण क्षणमा पनि प्रजातान्त्रिक झण्डा उँचो राख्ने उहाँलाई प्रजातन्त्र आफ्नो सन्तानभन्दा पनि प्यारो थियो । काइँला ‘बा’ कसैको गमला वा बगैँचाको नभएर आफ्नै बलबुताले पहरामा फुलेको फूल हुनुहन्थ्यो । काँल्दाई भीरमा हुर्किएको रुख हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले शायद उहाँ जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि झरिलो भरिलो हुनुहुन्थ्यो । उहाँ कहिल्यै ओइलाउनुभएन । आफ्नो आदर्श र सिद्धान्तमा कहीँ, कतै सम्झौता गर्नुभएन, कहीँ कतै चुक्नुभएन ।
उहाँ चारतारामा बीपी देख्नुहुन्थ्यो, बीपीमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद देख्नुहुन्थ्यो र प्रजातान्त्रिक समाजवादमा सबै नेपालीको एकमानाको बन्दोबस्तको सपना देख्नुहुन्थ्यो । निश्चय नै विपना उहाँका निम्ति विकृत र विकराल थियो तर सपना राम्रो देख्नुहुन्थ्यो । निराशा भन्ने उहाँमा कहिल्यै थिएन । उहाँ आशावादी र आफ्नो संकल्पमा सँधै पक्का हुनुहुन्थ्यो । उहाँको चारित्रिक र नैतिक स्वभाव उच्च थियो, स्वाभिमानी र साहसी पनि त्यत्तिकै, उहाँमा लोभलालच र मोह कुनै क्षणमा थिएन । उहाँ आफ्नो परिवार भन्दा पार्टीलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, आफ्ना बारेमा भन्दा पार्टीका साथीहरूका बारेमा धेरै सोच्नुहुन्थ्यो । उहाँ नेपाली समाजकै एउटा होनहार, उदाहरणीय एवम् श्रद्धेय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । उहाँ र उहाँजस्तै राजनेताहरूबाट सिकेर राजनीतिलाई सम्मानित र आदरणीय स्थानमा सँधै राखिरहन र जनताको सेवामा मात्र सञ्चालन पाए कति जाति हुन्थ्यो होला रु
वीपी चिन्तन प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका युवा नेता श्याम कृष्ण लम्सालको सहयोगमा
अघिको समचार संसद पुर्नस्थापना भए सरकारलाई अमान्य हुने आशय व्यक्त, आन्दोलन गर्ने चेतावनी
अर्को समचार पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ फाल्गुन ९ गते (सन् २०२१ फरवरी २१ तारिख) आइतबार